Articles tagged 'sundowns'
Captain Deco rallies Gamecocks 25 February 2016 BULAWAYO - Chicken Inn skipper Danny “Deco” Phiri (pictured) believes his side will qualify for the African Champions League first round at the expense of South African giants Mamelodi Sundowns. The Gamecocks left Bulawayo yesterday for Tshwane, South Africa for Saturday's second leg at the Lu...
Zvishavane derby charms Mosimane 14 July 2014 HARARE - Mamelodi Sundowns coach Pitso Mosimame was on Saturday charmed by the explosive Zvishavane derby between FC Platinum and Shabanie Mine ranking it as one of the best that he has ever seen. Mosimane, who is in the country on a scouting mission, was highly impressed with the tension and ...
Kuda Mahachi joins Highlanders 14 February 2014 BULAWAYO - Zimbabwe star winger Kudakwashe Mahachi, who was recently bought by rich South African Premiership side Mamelodi Sundowns, has started training with Bulawayo giants Highlanders. The skilful midfielder was spotted at Bosso’s morning training session yesterday in what could be an indi...
Mahachi speaks on future 28 January 2014 CAPE TOWN - Zimbabwe national football team slippery winger Kuda Mahachi has revealed his desire to play in South Africa’s Absa Premier Soccer League. Mahachi has been in great form at the ongoing African Nations Championship (Chan) tournament. He put in a man-of-the-match display as Zimbabwe ...